भक्तपुर घटनामा संगै घर जोडिएकि छिमेकीले खुलाइन् यस्तो रहस्य, रुँदै दिइन् सनसनीपूर्ण बयान (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > भक्तपुर घटनामा संगै घर जोडिएकि छिमेकीले खुलाइन् यस्तो रहस्य, रुँदै दिइन् सनसनीपूर्ण बयान (भिडियो हेर्नुस्)
भक्तपुर घटनामा संगै घर जोडिएकि छिमेकीले खुलाइन् यस्तो रहस्य, रुँदै दिइन् सनसनीपूर्ण बयान (भिडियो हेर्नुस्)
admin September 14, 2020 September 14, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाडौ । एकै घरका तीन जना सहित कुकुरको पनि निधन भएपछि भक्तपुरको यो घटना रहस्यम देखिएको छ । केही दिन अघि नै एउटा घरका सबै सदस्यको निधन हुँदा पनि न छिमेकीले थाहा पाए न प्रहरीले । नयाँ पसल खोलेको केही दिनमै उनीहरुको निधन भएको हो । नयाँ पसल खोलेका कारण वरपरका छिमेकीले पनि त्यो थाहा पाएका थिए । पसल खोलेको भोलीपल्ट देखि नै उनीहरुको घरको ढोका खुलेन । निषेधाज्ञा भएका कारण पसल नखुलेको हुन सक्ने अनुमान छिमेकीले गरे । कोही पनि उनीहरुलाई बोलाउन गएनन् ।
घरमा श्रीमान श्रीमती र एक छोरा बस्थे । उनीहरुले एउटा कुकुर पनि पालेका थिए । घरमा भएका सबैको निधन भएको अवस्थामा फेला परेका हुन् । सोही घरको पुरुषको भाई बुहारी मासु किनेर छोड्न भन्दै जाँदा सबैको निधन भएको अवस्थामा देखेका थिए । देउरानी एक्कासी रुँदै र कराउँदै बाहिर निस्केको देखेपछि छिमेकी भेला भएका थिए । घर नजिकै यस्तो घटना भएपछि छिमेकी पनि डराएका छन् । उनीहरुले देउरानी आएर रुँदै बाहिर निस्केपछि मात्र आफुहरले सुनेको बताएका छन् ।
भक्तपुरको निकोसेराबाट सिन्टिटार जाने सडकमै रहेको चारतले घरमा कुकुरसहित ३६ वर्षीय सुदीप अधिकारी, ३४ वर्षीया श्रीमती सम्झना र यस वर्ष मात्रै एसइई परीक्षामा ‘ए’ ल्याएर उत्तीर्ण गरेका १५ वर्षीय छोरा सुशान्तको निधन भएको हो । उनीहरुले पालेको कुकुर पनि म रे को थियो । पसल सञ्चालन गरेका उनीहरु छिमेकीसंग त्यती घुलमिल हुने ब्यवहारका थिएनन् । उनीहरु आफ्नो काम गर्थे कसैसंग कुराकानी गर्ने र कसैको घरमा जाने आउने गर्ने पनि गर्थेनन् । त्यसैले उनीहरुलाई केही दिन यता बाहिर कतै निस्किएको नदेख्दा पनि कसैले वास्ता पनि गरेनन् ।
मथिनपा–६ कुण्डोल बस्ने सुदीपका भाइ सुनिल अधिकारी र उनको श्रीमती शुक्रबार अपराह्न दाजुको घरमा मासु पु¥याउन जाँदा दाजुका सबै परिवार मृ त देखेपछि घटनाबाहिर आएको थियो । अहिले घर नजिकै यस्तो घटना हुँदा टोलमा स्थानिय डराएका छन् । कुरा गर्दा पनि सबैको आँखामा आँशु आएका छन् ।
दिनरात जतिबेला पनि त्यो घटना याद आउँछ उनको घर नजिकै घर भएकी छिमेकी महिलाले भनिन् । उनले अधिकारी परिवारले कहिल्यै कसैसंग विवाद नगर्ने र उनीहरुका घरमा कहिल्यै विवाद भएको आफुले थाहा नपाएको बताएकी छन् । कोही विवाद गर्न आएको पनि थाहा छैन, उनीहरुले पनि कसैसंग विवाद गरेका थिएनन्, उनले भनिन्, आफने काम गर्ने कसैसंग धेरै घुलमिल नहुने स्वभावका थिए ।
भाइरल दिदी यस्तो अवस्थामा : प्र’हरीबाटै भयो यस्तो दु’र्व्य’वहार (भिडियो सहित)
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कोरोनाले यति धेरैकाे ज्यान गएपछि…
एक पुर्व सैनिकले गरे निर्मला हत्याकाण्डको यस्तो पर्दाफास, हेर्नुहोस् भिडियो>>>
गोपेश्वर शिवालय मन्दिरमा देखा परेको सर्पले देखायो यस्तो अनौठो व्यबहार, स्थानीय अचम्मित (भिडियो सहित
बिवाहपछि श्रीमानले छाडेर गए , पैसाकै कारण निभेकि एउटा दियो, यस्तो अवस्था कसैकाे नहाेस्(भिडियो सहित)
पति बाहिर भएको बेला ग*र्भवती भएकि श्रीमतिले दिइन् दुनियाँ चकित हुने यस्तो जवाफ! (भिडियो)
ओठ पातलो हुने व्यक्ति हुन्छन् सरल, ठूलो हुने प्रभावशाली: ओठको आकार हेरेर थाहा पाउनुहोस् भाग्य
बलिउडमा राज गर्ने एक मात्र नायिका मनिषा कोइरलाको घर कुनै राजमहल भन्दा कम छैन (भिडियोमै हेर्नुस)
‘पुर्खाको पालादेखि नै भोगचलन गरिरहेको जमिन कसरी सरकारले चीनको भन्दैछ ?’
०७७ साल असोज १० गते इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर २६ तारिख शनिबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
किशोर-किशोरी के चाहन्छन् ?
admin July 7, 2020 July 7, 2020
०७७ साल असोज ०९ गते, ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर २५ तारिख शुक्रबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
३ श्रीमानको १ श्रीमति बन्दना बानियाको बल्ल खुल्यो बास्तबिकता, लम्जुङकाबासीले खोले होसै उडाउने रहस्य (हेर्नुहोस भिडियो)
छोराको जन्मदिन मनाउन पसलबाट निस्केका शंकर घर पुग्नै पाएनन, श्रीमति पुग्दा यस्तो!
बिहान उठ्ने बित्तिकै आफनै हातको दर्शन गर्नुहोस्, हरेक काम बन्नेछ छिनभरमै सफल !